Daah-furka sanad-dugsiyeedka 2016-2017-ka ee Dugsiyada Salaama + darreenka Ardayda ka Aflaxday, dardaaranka Hogaamiyeyaasha Siyaasada iyo Dhaqanka iyo Dawanka Daarta Tacliinta
Hargeysa(GNA)-Dugsiga Salaama oo kamid ah Dugsiyada gaarka loo leeyahay ee ka dhisan Magaalada Hargeysa, ayaa Munaasibad sagootin ah u sameeyey In ku dhow saddex boqol oo Arday oo ka qalin-jabiyey Dugsiga sare, sidoo kalena daah-furay sanad-dugsiyeedka 2016-2017.
Munaasibadda daah-furka sanad dugsiyeedka dugsiga oo ka qabsoontay Hudheelka Maansoor, waxa ka qayb-galay Maamulka Dugsiyada Salaama, Masuuliyiin ka socda Wasaarada Waxbarashada, Hogaamiyeyaasha Asxaabta qaranka, Waalidiin, Macalimiin, Marti-sharaf iyo Arday tiro.
Xaflada ayaa intii ay socotay waxa Shahaadooyin iyo abaal-marino kala duwan lagu giddoonsiiyey Ardaydii Kaalmaha hore ka galay qaybaha kala duwan ee Dugsiga iyo kuwo lagu maamusay Akhalaaq-wanaaga, waxaana abaal-marino la guddoonsiiyey 79 Arday oo isugu jira heerarka waxbarasho ee sare, kuwaasoo mid walba la siiyey bushqad hadyada oo loogu talo-galay.
Maamulaha Dugsiyada Salaama Siciid Faarax xafladaas hadal dheer ka jeediyey, ayaa sharaxaad dheer ka bixiyey sooyaalka waxbarasho ee Dugsiyada Salaama iyo qorsheyaasha waxbarasho ee Mustaqbalka dhow, siiba sanad dugsiyeedka cusub ee munaasibada lagu daah-furay, isagoo geesta kalena u hambalyeeyey Ardayda dhamaystay waxbarashada sare iyo Dhexe ee Dugsiga sanad-dugsiyeedka 2015-2016 ee Xafladaas lagu sagootiyey.
Maamulaha ayaa sheegay in Dugsiga sare ee Salaama ay Ardayda sanadka ka baxaysaa ay tahay dufcadii 3-aad, saddexdii sannadood ee u dambeeyeyna waxa uu tilmaamay inuu ku guulaystay Kaalmaha sare ee Imtixaanka Shahaadiga ah ee Qaran.
“sanadkii ugu horeeyey Ardayda Salaama Kaalinta siddeed ayay ka galeen Imtixaanka dugsiyada sare ee dawladda, sanadkii hore Lix kaalmoodbay ka galeen ardaydii ugu sareeyey, sannadkana Kaalinta saddexaad ayey galeen ardayda dugsiga Salaama” ayuu yidhi Siciid oo sheegay in Dugsigani horumar laxaadle ku talaabsanayo sanadba sanadka ka dambeeya. “waxa kale oo iyaduna guul ah in Ardayda Salaama mar walba dhibcaha ugu sareeya ka keenaan Imtixaanka oo ay ugu sareeyaan celceliska imtixaannada marka la soo dhejiyo” ayuu hadalkiisa raaciyey.
Maamulaha ayaa sidoo kale sheegay in Dugsiyada Salaama hadafkoodu uu yahay inay soo saaraan Jiil aqooneed ka dhisan dhinaca Akhalaaqda iyo dhanka Tacliinta, “waxaanu xoogga saarnaa inaanu Ardayda ka dhisno dhanka akhalaaqda iyo xagga waxbarashadaba, sababtoo ah waxbarashaddu waxba ma tarto haddaanay huwanayn akhalaaq fiican”.
Maamulaha Dugsiyada Salaama isagoo la dardaarmaya Macalimiinta iyo Waalidka Ubadka dhalay wuxuu yidhi “ Macalimiinta Dugsiyada Salaama oo ah baalasha aanu ku duulno waxaan leeyahay dedaalkiina halkaa ka sii wada. Waalidkana waxaan leeyahay Carruurtu waxay si fiican wax u bartaan marka waalidku dhankiisa ka dhiso Ilmaha, Macalinkuna si fiican wax u baro, waa masuuliyaddo labada saaran” ayuu yidhi. Waxa uu ugu dambeyn la dardaarmay Ardayda dhamaysatay Dugsiga sare, waxaanu yidhi “ Tacliintu waxay la bilaabantaa qofka noloshiisa waanay la dhamaataa, waayo waxay leedahay albaab laga soo galo ee malaha albaab laga baxo, sidaad daraadeed waxaan leeyahay ardaydaas tacliintiina sii wata oo halkaa ha kaga hadhina” ayuu yidhi isagoo ku dhawaaqay in Dugsiga Salaama u taaganyahay horumarinta Cilmiga iyo dabar-goynta Jahliga.
Nimco Cabdirashiid Aadan, waa 17 Jir waxbarashada dugsiga sare ka dhamaysatay Dugsiga Salaama Secondary, waxa ay degentahay Xaafada New-hargeysa ee Degmada Gacan-libaax (Hargeysa).
Nimco waxa ay qalin-jabinta Dugsiga sare nasiib u heshay inay munaasibadan ku sagootiyaan iyada iyo boqolaal kale oo faceed ahi maamulka Dugsiga ay ka baxday “waan ku faraxsanahay inaan dhamaystay dugsigii sare ee waxbarashada. waxaan aad iyo aad ugu mahad-celinayaan Macalimiintaydii wax i baray iyo waalidkii igu tabcay.” Ayey u sheegtay Wariyaha Gobanimo nee Hargeysa.
Nimco ayaa intaa raacisay “Dugsiga Salaama waa dugsiga ugu wanaagsan Somaliland, waana sababtaan ku doortay. Waxaan doonayaa inaan sii wato waxbarashada oo aan barto culuumta maamulka iyo dhaqaalaha” ayey tidhi Nimco oo ay wada socdeen afar kamid ah Asxaabteeda oo gabdho ahaa, waxaanay tilmaantay inay Tacliinta sare aad ugu wanaagsanayd Maddooyinka Xisaabta iyo Luuqadaha “waxaan aad ugu wanaagsanaa Xisaabta iyo Luuqadaha, iminkana waxaan doonayaa inaan barto Maamulka.”.
Cabdisalaan Maxamed Sh. Cabdilaahi Sh. Cumar oo ah Ardaygii ugu sareeyey Imtixaanka Shahaadiga ah ee Dugsiga sare ee Salaama, Kaalinta saddexaadna ka galay natiijada guud ee Imtixaanka shahaadiga ah ee heer Qaran dugsiyada Sare ee Somaliland, ayaa munaasibadaas ka hadlay, waxaanu yidhi “waxaan aad iyo aad ugu mahad-celinayaa waalidkii igu soo tabcay ee waxbarashada ii suurto-geliyey iyo macalimiintii iyo maamulkii dugsigayga Salaama oo aanan waligay Ilaabin doonin, sidii fiicnayd ee ay aqoonta noo barayeen. Way ku mahadsantihiin maamulkayga iyo macalimiintayda Salaama Schools” ayuu yidhi Cabdisalaan oo ah 18 maanka iyo maskaxda ku haya cid kasta oo gacan ka siisay helida waxbarasho uu heerkan ka gaadho.
Xubno kamid ah Madaxda xisbiyada Mucaaridka ah iyo Wasaarada Waxbarashada iyo Tacliinta sare oo Xaflada haddalo ka jeediyey ayaa Hambalyo u jeediyey da’yarta ka aflaxday Dugsiyada Salaama, iyagoo dhinaca kalena ammaan iyo duco ku hurgufay Maamulka iyo Macalimiinta u hagar-baxay wax-barista Ubadka dugsigu sagootiyey iyo kumanaanka kale ee wali baaqiqa ku ah heerarka waxbarasho ee aasaasiga ah ee dugsigaas.
Guddoomiyaha Xisbiga Ucid Eng. Faysal Cali Waraabe, Murrashaxa Madaxweyne ee Xisbigaas Jamaal Cali Xuseen, Guddoomiye ku-xigeenka Xisbiga Waddani Axmed Muumin Seed, Suldaanka guud ee Beelaha Subeer Awal Suldaan Xasan Suldaan Cabdilaahi, Muuse Maxamed Shide Agaasimaha Waaxda Waxbarashada gaarka loo leeyahay ee Wasaarada Waxbarashada iyo Tacliinta sare, waalidiin iyo xubno kale oo isugu jira Aqoonyahan iyo waxgarad oo xafladaas haddalo ka jeediyey, ayaa hambalyo iyo ammaan balaadhan u jeediyey Maamulka, Macalimiinta iyo Ardayda waxbarashada ka dhamaysatay Dugsiga sare ee Salaama.
Dhamaan xubnahan metelayey qaybaha kala duwan ee Bulshada, waxay ka markhaati kaceen Dugsiyadda Salaama horseed ka noqdeen hirarka Tacliinta heerarkeeda lagaga aflaxo, waxaanay ku booriyeen Maamulka iyo macalimiinta dugsiyadaas inay halkaa ka sii wadaan dedaalka ay ugu jiraan barbaarinta iyo wax-barista ubadka soo koraya.
Dugsiga sare ee Salaama oo bah-wadaag la ah Machadka Luuqadaha iyo culuumta Xirfadaha kale lagu barto iyo dugsiga hoose dhexe, kuna bahoobay magaca Salaama Schools, ayaa waxa la aasaasay sanadkii 2012-kii, halka ay qaybaha kale ee Machadka iyo dugsiga hoose jireen tobaneeyo sanno.
Dugsiga sare ee Salaama ayaa mudadaas kooban ee uu jiray waxa uu sida cadceeda uga soo dhex mudhay Goobaha lagu barto Tacliinta sare, taasoo musawir lagu hirto ka bixinaysa tayada waxbarashadiisa. S
282ARDAY arday AXMED MUUMIN DAAH-FURKA FAARAX SALAAMA SANAD-DUGSIYEEDKA 2016-2017 SCHOOLS SEED SICIID Somaliland	2016-08-18
Previous: Orodyahankii Somaliya u ordaayey Maxamed Dauud oo markii orodkii dhamaaday garoonka gaadhi curyaan lagaga qaaday
Next: Somalia President Candidate offers answers to questions about her marital history